विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा(भिडियो) - nayakhoj24.com
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा(भिडियो)
सोमबार काठमाडौंको विमानस्थलमा विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा उनका श्रीमान् दिनेश हुमागाई पनि परेका थिए । तर भाग्य बलियो भएर उनी बाँचे । सामान्य चोटपटक लागेपनि अरु कुनै गम्भिर असर परेन । हामी शान्तिनगर पुग्दा परिवार शान्तिको शास फेरिरहेको थियो । र, दिनेश भन्दै थिए पूर्नजन्म पाइयो । अहो मेरो भाग्य ।तर, अहिले पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा उनको मृत्युको खबर बाहिर आइरहेको भन्दै विक्षिप्त बनाएको बताए । यसले आफन्तजन थप अत्तालिएको दुखेसो गरे ।
Posted in भिडिओ
नेपाल आईडल-२ मा जजहरु पनि परिवर्तन भए ?
​सनी लियोनको रेकर्ड यसरी तोडिन् प्रिया प्रकाशले !
ट्राफिक प्रहरीलार्इ यसरी बिच सडकमै फुच्चे केपी खनालले तह लगाए (भिडियो)
नपत्याउँने खोलाले बगाउँछ भनेको यही हो ! अबको २५ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी (भिडियो)-
यस्तो के छ ब्ल्याक प्यान्थरमा जसले कमायो अर्बाैँ डलर (भिडियो)
भारतमा सन्दिपले मचाए घमाल , भारतिय मिडियामा सन्दिपको पहिलो अन्तर्वाता ( भिडियो सहित )